एमालेसँग मिल्न लागेको माओवादीलाई सचिव सरुवामा आपत्ति किन ?
काठमाडौं २५ चैत– नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको अन्तिम तयारी गरेको माओवादी केन्द्रले नेपाल सरकारका सचिव सरुवाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको झल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि सचिवहरुको सरुवा गरेका थिए ।
आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिइ पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरिएकोप्रति माओवादी केन्द्र रुष्ट देखिएको हो ।
सचिव सरुवा भएकै दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको घरमा बसेको माओवादी मन्त्रीहरुको बैठकले सचिव सरुवाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
एमाले र माओवादीबीच वैशाख ९ मा पार्टी एकीकरण गर्ने तयारी भएको नेताहरुले बताइसकेका छन् । तर पार्टी नै एकीकरणको तयारी गरेको माओवादीले सचिव सरुवामा किन आपत्ति गरेको होला ?
‘नेपाल सरकारका सचिवहरु लोकसेवा पास गरेका आएका हुन्, कोही पनि चुनाव जितेर आएका होइनन्,’ एक पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘राम्रो काम गर्नलाई जुन सचिव भएपनि के फरक पर्छ ?’
एमाले स्रोत पनि सचिव सरुवाको बिषयलाई लिएर माओवादीले आपत्ति गर्नु नपर्ने बताउँछ । ‘हामी १४–१५ दिनपछि पार्टी एकता गर्दैछौं भने सचिव सरुवाको बिषयलाई लिएर असन्तुष्टि लिनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ एमालेका एक नेताले भने ।
विगतमा मन्त्रीहरुले सचिव रोज्ने चलन रहे पनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवको सरुवा गरेपछि मात्र मन्त्रीहरुले थाहा पाएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले योग्यता र क्षमताका आधारमा सचिवहरुको सरुवा गर्नु भएको छ, यसमा कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन,’ समान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘राम्रो काम गर्ने मन्त्रीहरुलाई सचिवले रोक्दैनन् ।’
तयारी अनुसार पार्टी एकता भएमा अहिले माओवादी रहेका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीमा समाहित हुनेछन् ।
चैत २५, २०७४ मा प्रकाशित
सांसद्को संख्या ८८४ कि १२५९ ?
गोकर्णको छलाङ : सिन्डिकेट बाईबाई, श्रम कार्यालय स्थापना र सुरक्षा योजनाले हाईहाई !